Mangaki Umthethosivivinywa Wezomthetho We-Federal kuCongress? | abameli bezimboni ze-cannabis
Isimo Somthethosivivinywa Wezomthetho Sokusebenza Kwezimali Zonyaka we-2019
Mangaki ama-Federal Legalization Bili eCongress?
Okungenani izikweletu eziyi-8 zikwiCongress manje ukuze zibhalise insangu ngokusemthethweni, kepha kunezelwa eziningi ngosuku ngalunye. Izintela ezinkulu okufanele zibukwe yilezi: STATES Act, SAFE Banking Act, Marijuana Justice Act, REFER Act, SECA, kanye ne CAREERS Act
Eziningi insangu esemthethweni izikweletu ukusebenza bedabula ihholo leCongress liwela emaqenjini amabili - ukudonswa kwezikhathi, noma amaqembu ezizwe '.
Our Ama-cannis Attorneys bakholelwa ukuthi izikweletu zamaLungelo eMelika eCongress azingqubuzani nomthethosisekelo, futhi azisebenzi kangako, kunezikweletu eziseCongress ezihlongoza ukulahla insangu eMthethweni Wezinto Ezilawulwayo ngokuphelele. Sizothinta kafushane iMithetho Eyisishiyagalombili okukhulunywe ngayo kuvidiyo engenhla, ngezansi.
Shayela Abameli Bethu bebhizinisi leCannabis kuZindaba Zezomthetho Eziyisisekelo
Uma ufuna ukukhulisa i-hemp e-Illinois - qedela i-chat bot kule webhusayithi - noma ushayele abameli bethu be-cannabis namuhla ku (309) 740-4033
UThomas Howard ubesebhizinisini iminyaka eminingi futhi angasiza eyakho ukuthi ifinyelele emanzini anenzuzo enkulu. Mfonele namuhla mayelana nebhizinisi lakho le-cannabis le-hemp noma insangu e-Illinois.
Isimo Somthethosivivinywa Wezomthetho Wezezimali - 2019
I-2019 ibone iCongress enobungane kakhulu emlandweni selokhu yavula iseshini ye-116 (isikhathi ngasinye seCongress sineminyaka emi-2). Simangele ukuthi ukuqiniswa kwensangu kusondele kakhulu kunakuqala, kepha hhayi uma umthetho wezomthetho uhlangana, siqala ngomthethosivivinywa omuhle, onethuba elihle lokuphasa futhi ube ngumthetho.
UMSEBENZI WOKUPHEPHA WOKUPHATHA - kuCongress
Sesivele sibhale kakhulu kumthethosivivinywa wokumisa insangu ophumelele kakhulu eCongress - Umthetho Wezimali Wasebhange i-SAFE.
Ngakho-ke singayiphinda ngokushesha okukhulu. I-SAFE Banking Act ichaza igama elisha lobuciko obusemthethweni, “amabhizinisi asemthethweni ahlobene nensangu” bese ibavulela izinsizakalo zezezimali. Njengamanje, ubugebengu obuningi bombuso buvimbela izinkampani zensangu ezihambisana nomthetho ekufinyeleleni kuma-akhawunti asebhange.
Indaba ende, Umthetho weSAFE ulungisa konke lokho ukuze amabhizinisi asemthethweni ahlobene nokwenziwa insangu akwazi ukubhanga njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi futhi agweme uhlu lokugeza lwezinkinga oluvela ekuqhubeni ibhizinisi lakho ngalutho ngaphandle kwemali ebandayo edinga ukuphepha, ihlome onogada nezinye izinkinga zokubalwa kwezimali ama-akhawunti asebhange asiza ukugwema.
STATES Act - Umthethosivivinywa Wensangu Ongavumelani noMthethosisekelo eCongress
Umthetho wokuqina we-Tening Amendment ka-Entrishing States (STATES) kuCongress uqokomisa amaqiniso amabili abalulekile ngeCongress abantu abaningi abangawanaki:
ICongress yethula imithetho engekho emthethweni ngaso sonke isikhathi, futhi
ICongress ithande ukuqamba amagama akhombisa amagama apela amagama
Umthetho we-STATES uchibiyela Umthetho Okulawulwayo Wezinto ukudala umthetho wokunciphisa amandla emithetho yezwe ehlisa abantu ilungelo labo lokuchibiyela le-14 lokuvikelwa okulinganayo ngaphansi kwemithetho. Isichibiyelo se-14 saqhamuka ngemuva kweMpi Yombango ukuvimba ezinye izifundazwe ukuba zbandlulula abantu bazo futhi zibaphathe ngendlela ehlukile ngaphansi komthetho.
Ukukhula Kwe-Cannabis kuCongress
Ngaphansi I-STATES Act, othile osesimweni sokuthi insangu esemthethweni ingajabulela insangu esemthethweni ezingeni likahulumeni, kepha umuntu osesifundeni lapho insangu ingekho emthethweni uzojeziswa ezingeni likahulumeni ngaphansi komthetho ofanayo. Ngalesi sizathu, izakhamizi zizophathwa ngemithetho ehlukene yobugebengu ezingeni likahulumeni ngokuya ngesimo abahlala kuso - a / k / umthetho we STATES ukwephula umthetho wakho ngokungavumelani nomthethosisekelo welungelo lakho lokuvikelwa okulinganayo ngaphansi kwemithetho ngakho-ke iningi amanye amalungelo wombuso wezimali zomthetho ku-congress.
S. 420 - Umthetho Wentela Nokulawulwa Kwensangu
Umthetho Wezimali Zentela Nokulawulwa Komthetho ususa insangu kuMthetho Wezinto Ezilawulwayo (CSA), bese yakha uhlaka lokwakha imali yentela evela ekuthengisweni kwensangu kuhulumeni wesifundazwe. Ngenkathi sise I-CannabisIndustryLawyer.com ukusekela ukumiswa kwe-cannabis evela ku-CSA, asifuni noma iyiphi intela yenhlangano futhi sikhetha izifunda zentela zangasese. Izwe zidinga imali engenayo engaphezu kukahulumeni wobumbano, ikakhulukazi izifundazwe ezisekupheleni, njenge-Illinois.
Izichibiyelo Ezenziwa Ngezimo Ezilawulwa Ngaphezulu KweMarijuana
Into eyodwa ephakanyiswa yizo zonke izikweletu zikahulumeni ukushintshela kwi-CSA - umthetho owenze kube yicala yonke insangu kusukela ngo-1970, eyachitshiyelwa ngasekupheleni kuka-2018 ukukhipha i-hemp-free hemp. Kuze kube yileso sikhathi, yonke insangu ibiphathwa sengathi iyinsangu… .namagama amaningi ahlukene kubaculi be-jazz, njenge-jive, noma i-reefer, okusiletha enkantolo elandelayo eCongress yokufaka insangu ngokusemthethweni.
REFER Act - Ukuvimbela Ukusetshenziswa Komthetho Okudlulele Kombuso
UReefer kwakuyigama elithi Cab Calloway elisetshenziselwa insangu engomeni yakhe ethandwayo yango-1933, ethi “Reefer Man.” Eminyakeni engaphezu kwengama-80 kamuva, iCongress iphinda isebenzisa umhlangano wayo odumile wokuqamba amagama ukudala igama elivela kusichasiselo sezikweletu zayo - ngeREFER Act.
The REFER Act kuyafana ne-STATES Act ngoba ihlinzeka ngeziphathimandla ezizweni ukuba nemithetho yazo yensangu.
Kodwa-ke, kubonakala kungahambisani nomthethosisekelo kune-STATES Act ngoba i-REFER Act ikhokhela uhulumeni wesifundazwe ekusebenziseni imithetho yakhe ye-cannabis ngokumelene neminye imithetho yombuso eyenziwe. Lokhu akuhambisani nomthethosisekelo kakhulu ngoba iCongress inelungelo lokwaba izimali ezikhona ukuphoqelela imithetho, futhi nemithetho yenhlangano ngeke ichitshiyelwe ukuthi ingalingani njengoba ingaphansi koMthetho we-STATES.
TL; DR = REFER Act> STATES Act, kepha hhayi ukugunyazwa ngokugcwele, ngalokho okudingayo.
UMthetho weJustjuana Justice Act ka-2019
The UMthetho wezoBulungiswa baseMarijuana (UMJ Act) umthethosivivinywa weCory Booker oyingxenye ye-Next Step Act yakhe enkulu, kepha futhi ubukeka uyisikweletu sazo sodwa. I-Next Step Act kungumsebenzi omkhulu osemthethweni, ngakho-ke wephula umthetho we-MJ
Umthetho i-MJ Act awugcinanga nje ngokugunyaza insangu ngokuyiyeka kwi-CSA, kepha uyaqhubeka nokubhekana nokuguqulwa kobulungiswa bezobugebengu obudingekayo ngemuva kweminyaka engama-80 yezinqubomgomo eziyinhlekelele ezilimaze abantu ngokwenza icala lokuba umlutha wezidakamizwa, noma izitshalo endabeni yensangu. Umthetho i-MJ Act futhi ufuna ukuthi kusulwe ngokuzenzekelayo ubugebengu bensangu!
Izosiza iziboshwa eziningi zombuso ukuthi zifake izicelo zokuncishiswa emishweni yazo futhi zisize ukubuyisela labo abalimele ngemithetho emibi yensangu emphakathini.
Umthetho we-MJ wumthethosivivinywa wethu osithandayo kubo bonke abasebenza eCongress (sisekela noMthetho oMlandela we-Next Step ohlanganisa i-MJ Act), kusho uNuff.
Izimali Zomthetho Zobumbano kuCongress
Lesi yisikhathi esisebenza kakhulu emithethweni yensangu ezingeni likahulumeni cishe iminyaka engamashumi amahlanu lapho kwaqhamuka i-CSA, kepha manje imithethonqubo ehlongozwayo yonke ibhekana neqiniso elisizungezile. Ukuthola umthetho ngokusemthethweni kwe-Marijuana kusebenzela izifundazwe ezizame kakhulu, kungcono kakhulu kunokwelashwa kwensangu okufana ne-heroin ngaphansi kwemithetho yezidakamizwa.